समाधान गरिएको: वाइफाइ विन्डोज १० २०H2 अपडेट पछि विच्छेदन राख्छ - विन्डोज १०
समाधान गरिएको: वाइफाइ विन्डोज १० २०H2 अपडेट पछि विच्छेदन राख्छ
वाइफाइ विच्छेदन राख्दछ र स्थापना पछि बारम्बार पुन: कनेक्ट गर्दछ विन्डोज १० अपडेट ? धेरै विन्डोज प्रयोगकर्ताहरूले अपग्रेड गरे पछि रिपोर्ट गरे विन्डोज १० अक्टूबर २०२० अपडेट अनुभव गर्दै वाइफाइले स्वत: विच्छेदन गर्दछ । केही अन्यले पछिल्लो प्याच अपडेट स्थापना गरेपछि, वाइफाइले हरेक १० मिनेट वा इन्टरनेट जडान छोड्दै जान्छ र इन्टरनेटको पहुँच १० - २० सेकेन्डको लागि काटिन्छ र फेरि आउँछ।
सामग्रीहरू देखाउनु १ वाइफाइ विच्छेदन विन्डोज १० राख्छ १.१ वाइफाइ सेन्स असक्षम गर्नुहोस् १.२ नेटवर्क एडेप्टर समस्या निवारक चलाउनुहोस् १.3 नेटवर्क रिसेट १.4 वाइफाइ एडाप्टरको लागि ड्राइभर अपडेट गर्नुहोस् १. वायरलेस ड्राइभर स्थापना गर्नुहोस् १.6 कम्प्युटरलाई वाइफाइ एडाप्टर बन्द गर्न रोक्नुहोस्
समस्या वायरलेस नेटवर्क पत्ता लाग्यो र उपलब्ध छ तर केहि कारणका लागि, यो विच्छेदन हुन्छ र त्यसपछि स्वचालित रूपमा पुन: कनेक्ट हुँदैन। यदि तपाईं पनि यस्तै समस्या संग संघर्ष गर्दै हुनुहुन्छ वाइफाइ विन्डोज १० मा विच्छेदन मुद्दा राख्छ यसबाट छुटकारा पाउनको लागि ल्यापटप यहाँ bellow समाधानहरू लागू गर्नुहोस्।
विन्डोज अपडेट ० मा अडियो
वाइफाइ विच्छेदन विन्डोज १० राख्छ
आधारभूत समस्या निवारणको साथ सुरू गर्नुहोस् केवल तपाईंको राउटर, मोडेम वा स्विच पुनःस्टार्ट गर्नुहोस्। रिस्टार्ट पछि वाइफाइ नेटवर्कमा जडान हुन्छ र चेक, अझै पनी समस्या छ अर्को समाधान अनुसरण गर्नुहोस्।
एन्टीवायरस सफ्टवेयर र VPN असक्षम गर्नुहोस् यदि कन्फिगर गरिएको छ।
वाइफाइ सेन्स असक्षम गर्नुहोस्
सेटिंग्स खोल्न विन्डोज कुञ्जी + I थिच्नुहोस् र त्यसपछि नेटवर्क र इन्टरनेटमा क्लिक गर्नुहोस्।
अब बायाँ फलक विन्डोमा वाइफाइ क्लिक गर्नुहोस् र दायाँ विन्डोमा वाइफाइ सेन्स अन्तर्गत सबै असक्षम गर्न निश्चित गर्नुहोस्।
साथै, निश्चित गर्नुहोस् कि हटस्पट २.० नेटवर्कहरू र सशुल्क Wi-Fi सेवाहरू असक्षम गर्नुहोस्।
तपाईंको Wi-Fi जडान विच्छेदन गर्नुहोस् र पुन: जडान गर्न पुन: प्रयास गर्नुहोस्। हेर्नुहोस् यदि तपाईं फिक्स गर्न सक्षम हुनुहुन्छ वाइफाइ विन्डोज १० मा विच्छेदन राख्दछ।
वाईफाई अर्थ असक्षम गर्नुहोस्
यस पछि, तपाईंको कम्प्युटर पुनःस्टार्ट गर्नुहोस् र हेर्नुहोस् तपाईंको विन्डोज १० कम्प्युटरबाट वाइफाइ विच्छेदनको समस्या ठीक छ कि छैन।
नेटवर्क एडेप्टर समस्या निवारक चलाउनुहोस्
विन्डोजसँग इनबिल्ट नेटवर्क एडाप्टर ट्रबलशुटिंग उपकरण छ, यो उपकरण चलाउनाले नेटवर्क र इन्टरनेट सम्बन्धी समस्या आफैंमा ठीक गर्न मद्दत पुर्‍याउँछ। हामी दृढताका साथ यो उपकरण पहिले चलाउन सिफारिस गर्दछौं र विन्डोजलाई समस्या आफैं समाधान गर्न दिनुहोस्।
नेटवर्क र सुरक्षा मा क्लिक गर्नुहोस्।
स्थितिमा क्लिक गर्नुहोस्।
'नेटवर्क स्थिति' अन्तर्गत, नेटवर्क समस्या निवारण बटन क्लिक गर्नुहोस्।
र विन्डोजहरूलाई जाँच गर्न दिनुहोस् र समस्याहरू स्वचालित रूपमा तपाईको लागि ठीक गर्नुहोस्।
यसले इन्टरनेट र नेटवर्क सम्बन्धी मुद्दाहरूको जाँच गर्दछ यदि केहि फेला परेमा यसको परिणाम अन्त हुन्छ। समस्या निवारण प्रक्रिया पूरा भएपछि विन्डोज पुनःस्टार्ट गर्नुहोस् र WiFi डिस्कनेक्ट समस्या समाधान गर्नुहोस् यदि सुल्झाउने छैन अर्को निर्देशनहरू।
यदि समस्या निवारकले समस्या समाधान गरेन भने, तपाईं सक्नुहुन्छ तपाईंको सबै नेटवर्क एडेप्टरहरू रिसेट गर्नुहोस् यी चरणहरू प्रयोग गर्दै:
नेटवर्क रिसेट बटन क्लिक गर्नुहोस्।
रिसेट अब बटन क्लिक गर्नुहोस्।
यो प्रक्रिया प्रयोग गरेर, विन्डोज १० स्वचालित रूपमा तपाईको उपकरणमा कन्फिगर गरिएको प्रत्येक नेटवर्क एडेप्टरलाई पुन: स्थापना गर्दछ, र यसले तपाइँको नेटवर्क सेटिंग्सलाई पूर्वनिर्धारित विकल्पहरूमा पुनःसेट गर्दछ।
वाइफाइ एडाप्टरको लागि ड्राइभर अपडेट गर्नुहोस्
सामान्यतया, विन्डोज १० अपरेटिंग प्रणालीले स्वचालित रूपमा तपाइँको कम्प्युटरमा सबै उपकरणहरूको लागि ड्राइभरहरू अपडेट गर्नुपर्छ। जे होस्, यो सँधै हुँदैन, विन्डोज कम्प्युटरमा समस्या भएका पुरानो ड्राइभरहरूको कारण। र हालको संस्करणमा वायरलेस ड्राइभर अपडेट गर्नुहोस् सब भन्दा काम गर्ने समाधान समाधान गर्न सकिन्छ वाइफाइले विच्छेदन राख्दछ विन्डोज १० मा मुद्दा
वायरलेस ड्राइभर अपडेट गर्नुहोस्
विन्डोज १० मा हालको स्थापित वायरलेस ड्राइभर अपडेट गर्नका लागि,
स्टार्ट मेनूमा राइट क्लिक गर्नुहोस् र उपकरण प्रबन्धक चयन गर्नुहोस्।
यसले सबै स्थापित ड्राइभर सूची प्रदर्शन गर्दछ, नेटवर्क एडेप्टरको लागि खोज्नुहोस् र व्यय गर्नुहोस्।
यहाँ विस्तारित सूचीबाट तपाईको कम्प्युटरको लागि वाइफाइ एडाप्टरमा दायाँ क्लिक गर्नुहोस् र त्यसपछि कन्टेक्स्टल मेनूमा अपडेट ड्राइभर सफ्टवेयर विकल्पमा क्लिक गर्नुहोस्।
सुझाव: यदि तपाईंले धेरै प्रविष्टिहरू देख्नुभयो भने, केहि खोज्नुहोस् जुन नेटवर्क वा 80०२.११ बी भन्छ वा यसमा वाइफाइ छ।
रिमोट डेस्कटपले विन्डोज १० अपडेट पछि काम गरिरहेको छैन
अब अर्को स्क्रिनमा, अपडेट ड्राइभर सफ्टवेयरको लागि स्वत: खोजीमा क्लिक गर्नुहोस्। तपाईंको कम्प्युटरले तपाईंको कम्प्युटरमा वाइफाइ एडाप्टरको लागि भर्खरको ड्राइभर सफ्टवेयरको लागि खोजी सुरू गर्नेछ। यो कि त तपाइँलाई सूचित गर्दछ कि तपाइँको कम्प्युटर मा पहिले नै नवीनतम ड्राइभर सफ्टवेयर स्थापना भएको छ वा भर्खरको ड्राइभर सफ्टवेयर संग आउँदछ जुन तपाइँ स्थापना गर्न सक्नुहुन्छ।
वायरलेस ड्राइभर स्थापना गर्नुहोस्
नोट: तपाईं सीधा निर्माताको वेबसाइटमा जान सक्नुहुनेछ र पछिल्लो उपलब्ध वायरलेस ड्राइभर डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसपछि उपकरण प्रबन्धकमा नेटवर्क एडेप्टर मा दायाँ क्लिक गर्नुहोस् र त्यसपछि ड्राइभर सफ्टवेयर अपडेट गर्नुहोस्। यहाँ ड्राइभर सफ्टवेयरको लागि मेरो कम्प्युटर ब्राउज छनौट गर्नुहोस् र ड्राइभर मार्ग सेट गर्नुहोस् जुन तपाईं निर्माता वेबसाइटबाट डाउनलोड गर्नुहुन्छ। अर्को क्लिक गर्नुहोस् र वायरलेस ड्राइभर स्थापना गर्न अन-स्क्रीन निर्देशनहरू पालना गर्नुहोस्।
पूरा भएपछि, अद्यावधिक प्रक्रिया केवल विन्डोज १० ल्यापटप पुन: सुरुवात गर्नुहोस् र समस्या समाधान भयो। यदि तपाईंको कम्प्युटरमा वाइफाइ एडाप्टरको लागि ड्राइभर सफ्टवेयर पहिले नै अपडेट गरिएको थियो भने, तपाईंले अर्को विधिलाई प्रयास गर्नुपर्नेछ।
कम्प्युटरलाई वाइफाइ एडाप्टर बन्द गर्न रोक्नुहोस्
पहिले छलफल गरिएको जस्तो यो सम्भव छ कि तपाईंको कम्प्युटरले स्वत: यसको वाइफाइ एडाप्टर बन्द गर्दै छ शक्ति संरक्षण गर्नका लागि। यो पावर सेभिंग सुविधा तपाईको वाइफाइ नेटवर्कमा हस्तक्षेप गरेको देखिन्छ, तपाई यस सुविधा बन्द गर्न मा पर्याप्त जायज हुनुहुन्छ।
प्रेस विन्डोज र X कुञ्जीहरू सँगै र उपकरण प्रबन्धक चयन गर्नुहोस्।
पत्ता लगाउनुहोस् नेटवर्क एडाप्टर र ड्राइभर प्रतिमा विस्तार गर्नुहोस्।
नेटवर्क ड्राइभरमा दायाँ क्लिक गर्नुहोस् र गुणहरूमा क्लिक गर्नुहोस्।
पावर व्यवस्थापन ट्याबमा नेभिगेट गर्नुहोस्
यहाँ विकल्प 'अनचेक' भन्छ कम्प्युटरलाई पावर बचत गर्नको लागि यस उपकरण बन्द गर्न अनुमति दिनुहोस् '
बचत परिवर्तन गर्नका लागि क्लिक गर्नुहोस्, विन्डो रिस्टार्ट गर्नुहोस् र जाँच गर्नुहोस् त्यहाँ अधिक वाइफाइ विच्छेदन समस्या छैन।
अब नियन्त्रण प्यानल खोल्नुहोस् -> सानो प्रतिमा हेर्नुहोस् -> शक्ति विकल्पहरू -> योजना सेटिंग्स परिवर्तन गर्नुहोस् -> उन्नत पावर सेटिंग्स बदल्नुहोस्। नयाँ पपअप विन्डो खुल्नेछ। यहाँ विस्तार गर्नुहोस् ताररहित एडाप्टर सेटिंग्स , त्यसपछि फेरी विस्तार गर्नुहोस् पावर सेभिंग मोड।
अर्को, तपाईले दुई मोडहरू देख्नुहुनेछ, 'ब्याट्रीमा' र 'प्लग इन।' दुबैलाई परिवर्तन गर्नुहोस् अधिकतम प्रदर्शन। अब तपाईंको कम्प्युटरले वाइफाइ एडाप्टर बन्द गर्न सक्षम हुने छैन, जसले तपाईंको विन्डोज १० कम्प्युटरमा वाइफाइ विच्छेदनको समस्या समाधान गर्नुपर्दछ।
यी केहि राम्रो कार्य समाधानहरू छन् वाईफाई विन्डोज १० लेपटपमा विच्छेदन मुद्दा राख्छ। म आशा गर्दछु कि यी समाधानहरू प्रयोग गरे पश्चात तपाईंको समस्या समाधान हुनेछ। अझै, कुनै प्रश्न छ, यस मुद्दा को बारे मा सुझाव तल टिप्पणी गर्न स्वतन्त्र महसुस। साथै, पढ्नुहोस्
कसरी विन्डोज १० मा उपकरण ड्राइभर समस्याहरू ठीक गर्न
समाधान गरिएको: विन्डोज १० अपडेट पछि ब्लुटुथ प्रतिमा हराइरहेको छ
विन्डोज १०, .1.१ र on मा कसरी सुपरफेच सेवा असक्षम गर्ने
इथरनेटसँग मान्य आईपी कन्फिगरेसन (अपरिचित नेटवर्क) विन्डोज १० छैन
समाधान गरिएको: मेमोरी व्यवस्थापन BSOD (ntoskrnl.exe) विन्डोज १० मा त्रुटि
विन्डोज १० किबोर्ड र माउसले काम गर्न रोक्दछ
गुगल क्रोम विन्डोज १० लाई गति दिनुहोस्
विन्डोज १० अपडेट केबी हटाउनुहोस्
विन्डोज १० संस्करण १ 180०3 को लागि संचयी अद्यावधिक असफल भयो
विन्डोज १० कर्सरको साथ कालो स्क्रिनमा लगईन
एक वा बढी विन्डोज अपडेट कम्पोनेन्टहरू गलत रूपमा विन्डोज १० लाई कन्फिगर गरिएको छ